Eritrea oo magaceeda ka sifeysay in ay hub ku taageertey Shabaabka Somalia – SBC
Eritrea oo magaceeda ka sifeysay in ay hub ku taageertey Shabaabka Somalia
Posted by editor on January 17, 2012 Comments
Dawlada Eritrea ayaa ku guuleystey in ay magaceeda ka sifeyso eedeymo loo soo jeediyey oo ku aadanaa in ay hub ku taageertey xoogaga xarakada Shabaabka ee ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya, eedeyntaasi oo loo jeediyey sanadkii tagey.
Warbixin horudhac ah oo ay soo saareen gudiga ilaalinta cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ee hoost taga golaha amaanka ee qaramada midoobay magaciisana loo soo gaabiyo (SEMG) ayaa soo gunaanaday baaritaan ku aadan eedeymaha loo jeediyey Eritrea ee ku aadna inay hub siiyey xarakada Shabaabka.
“Baaritaanka horudhac ah ee kooxdaSEMG wuxuu wax kama jiraan ka dhigayaa eedeymaha ku aadan in Eritrea hub ku daabushay magaalada Baydhabo taasi oo aan mid aan dhicin” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saareen kooxdaasi.
Sidoo kale kooxdani waxay baaritaan ku sameysay in uu jiro hub garoomada ay maamulaan Shabaabka ee ku yaal koonfurta Soomaaliya bilihii October & November ee sanadkii 2011-kii hun laga dajiyey taasi oo aheyd eedeyn loo jeediyey dawlada Eritrea.
Kenya ayaa dhamaadkii sanadkii hore waxay eedeymo dusha u saartey dawlada Eritrea kuwaasi oo ku aadan in ay hub siiyey xoogaga Shabaabka, iyadoo sidoo kale u gudbisay dacwad iyo eedeyn ka dhan Eritrea golaha amaanka ee qaramada midoobay, taasi oo ay u marisay urur goboleedka IGAD.
Danjiraha Eritrea u fadhiya dalka Kenya Ambassador Beyene Russom ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ka codsatey golaha amaanka ee qaramada midoobay in si buuxda oo cadaalad ku saleysan baaritaan ugu sameyso eedeymahaasi iyo wax kasta oo la xiriira.
“Arimahan oo dhan waa been abuur ay ka sameyso Itoobiya, waana wax iska soo socdey oo ah been waligeed jirtey taasi oo dhan dawladeena” ayuu yiri danjire Russom.
Danjire Beyene Russom oo ka hadlayey eedeymaha ku aadsan in hub loo adeegsadey daabul xaga cirka ah la geeyey magaalada Baydhabo sida ay ku dhici karto, xili ay jirto ilaalo xoogan oo ku aadan diyaaradaha gooshaya hawada Soomaaliya gaar ahaan dhanka Koonfureed.
Dawlada Eritrea ayaa ku dhawaaqdey inay u dirayso magaalada Nairobi ee caasimada Kenya wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arimaha dibada Osman Saleh kuwaasi oo madaxda Kenya kala hadli doona arimahan ugu dambeeyey ee soo baxay iyo in ay meesha ka baxdey eedeyntii ka timid Kenya.
Danjire Beyene Russom oo wareysi siiyey mid ka mid ah Idaacadaha magaalada Nairobi ayaa sheegay in isaga shakhsiyan waa sida hadalka uu yiriy’e ay ka been abuurtey dawlada Itoobiya isla markaana ay Kenya u soo gudbisay warbixino ku aadan in uu taageero Al-Shabaab, isaoo arimahaasi ka hadlaya wuxuu yiri Beyene Russom.
“Tani waa beenta Itoobiya, xitaa markii aan imid magaalada Nairobi waa la iga been abuuray, markii aan ogaaday in been la iga faafiyey waxaan xitaa la kulmay madaxweyne Kibaki (Madaxweynaha Kenya), waxaan u sharaxay inaan xitaa u diyaar ahay in la igu sameeyo baaritaan, ilaa iyo intii aan imid Nairobi xitaa hal qof oo Soomaali ah lama kulmin” ayuu hadalkiisa sii raaciyey danjire Beyene Russom.
Danjiraha Eritrea ee Kenya oo sii hadlayey wuxuu sheegay in Kenya uu joogo isagoo wakiil ka ah dawladiisa balse aanu u joogin waa sida hadalka uu dhigaye in uu taageero waa uu ugu yeeray koox dambiile ah, aad ayaa u taxadarayey.